Kenshoo Kubhadhara Dhijitari Kushambadzira Snapshot: Q4 2015 | Martech Zone
Gore rega rega ini ndinotenda zvinhu zvichatanga kuyera, asi gore rega musika zvinoshanduka zvinoshamisa - uye 2015 yanga isina kusiyana. Kukura kwenharembozha, kusimuka kwezvishambadziro zvezvigadzirwa, iwo maratidziro emhando itsva dzezvishambadziro zvese zvakakonzera shanduko dzakakomba mukuzvibata kwevatengi uye mari inosanganisirwa nevatengesi.
Iyi nyowani infographic kubva Kenshoo inoratidza kuti zvemagariro zvakakura zvakanyanya pamusika. Vatengesi vari kuwedzera yavo yemagariro kushandisa ne50% YoY, uye tinya-kuburikidza nemitengo yakakura 64%. Izvo zvinhu zvikuru: iko kushanduka kwekukurumidza kweFacebook senge inoshamisa ine simba kushambadzira, Uye kuiswa kwe Instagram ads.
Nepo idzi nhamba dzichiratidza kuenderera kugamuchirwa kwe digital advertising pamusoro kushambadzira kwetsika, Handitende kuti idzi nhamba dzinotaura nyaya yese. Iko kukwira kwakakura mukushambadzira kwenzanga shanduko inoshamisa. Ini ndingafarire kuona kuparara kwemhando dzekushambadzira - vari kusimudzira zvine chekuita nazvo? Kana ivo vari kushambadzira zvigadzirwa? Pasina mubvunzo kuti Instagram ichaita zvakanaka parutivi rwechigadzirwa, asi ini handizoshamiswa kana kukura kwenzvimbo yekushambadzira kwainyanya kuve nekushambadzira zvine chekuita nezve zvemukati.
Pasina mubvunzo kuti Instagram ichaita zvakanaka parutivi rwechigadzirwa, asi ini handizoshamiswa kana kukura kwekushambadzira kwevanhu kwaiumbwa zvikuru zvemukati zvine chekuita nekutengesa. Anongova maonero angu ekuzvininipisa, asi ini ndichiri kutenda kuti nzira dzekushambadzira dzakasiyana zvakanyanya pakati pemapuratifomu. Sezvo isu tichishambadza paFacebook, isu tinoramba tichikwezva vateereri vane tarisiro kubva kure nekutaurirana kwevanhu uye kuita zvinomanikidza zvinyorwa, mifananidzo kana mavhidhiyo.
Asi sezvo isu tichishambadzira kushambadzira kwechigadzirwa pamapuratifomu senge Instagram, isu tinokwanisa kutyaira mushandisi zvakananga kubva pamufananidzo (uyo unongova nehanya kwavo pasina hurukuro) kuita fanera yekutendeuka. Ini ndinotenda ndicho chikamu chemasocial ads chisina kuongororwa zvakakwana asi chinofanirwa kuve.
Tags: 2015tinya kuburikidza mareticpcinfographickenshoonhare dzekushambadziraYeMahara neThebhu Kushambadziramhando nyowani dzekushambadzirakubhadhara pakukandappcchigadzirwa zvinyorwatsvaga kushambadzira maitirokutsvaga kushambadzira snapshottsvaga kushambadzira maitirotsvaga snapshotzvemagariro kushambadzirapasocial kushambadzira snapshotmagariro kushambadzira mafambiroyemagariro snapshot